Boqolaal Soomaali oo ku xiran Kenya - BBC Somali
Boqolaal Soomaali oo ku xiran Kenya
Image caption Qaraxa Nairobi ee dhacay Jimcihii waxaa ku dhintay hal askari, mid kalena waa ku dhaawacmay
Boqol iyo lixdan iyo toddobo oo Soomaali ah ayaa la keenay maxkamad ku taalla Nairobi, waxaana la sheegay in lagu soo eedeeyey in si sharci-daro ah ku joogeen Kenya.
Waxay ka mid yihiin ugu yaraan afar boqol oo Soomaali ah oo saraakiisha ammaanka ee Kenya ay xalay iyo shalay ka qabqabteen xaafadda ay Soomalida ku badantahay ee Eastleigh ee ku taala Nairobi.
Inta badan dadka la qabtay waxay ahaayeen dad aan haysan aqoonsiga kenya iyo aqoosiyo kale sida aqoonsiga dugsiyadda iyo jaamacadaha, waana la siidaayey
Howgalka booliska ayaa waxaa uu ahaa mid aanan lagu kala soocin dadka haysta sharciga iyo kuwa aan haysan.
Ugu dambeyntiina maxkamadda ayaa u kala soocday boqol lixdan iyo toddobo qof oo sheegay in ay haystaan aqoonsi iyo kuwa aan haysan.
Kuwii haystay sharciga waxaa loo sheegay in sharcigooda ay tusiyaan maxkamada berito, oo talaada ah oo dacwadooda la go'aamin doono halka kuwa aan haysan sharci ay u doodayso Qaramada midoobey.
Wakiil matalayey Hay'adda QM ugu qaabilsan Qaxootiga ee UNHCR oo la yiraahdo Kisabit Kiprop ayaa ku tilmaamay Soomalida aan haysan sharciga in ay yihiin kuwa magangalya doon ah, wuxuuna ka codsaday maxkamadda in si biniaadanimo ku jirto ay ula dhaqanto dadkaas, kuna maamusho xeer-ka u dejisan dadka magangalya doonka ah.
Inkastoo Boliisku sheegeen in howlgalkani ahaa mid lagu baarayey dadka aan sharci haysan ee Waddanka Soo galay, haddana waxaa jirta in jimcihii la soo dhaafay uu baabur qarax ku qabsaday mid ka mid ah waddooyinka xaafadda Easleigh, waxaana halkaas ku dhintay mid ka ah Booliska maamulka mid kalana waa u ku dhaawacmay.
Boolisku waxay sheegeen in kooxaha ka dagaalama Soomaliya aanay ku luglahayn qaraxyadda ka dhacay caasimada Nairobi.
Inta badan boliisku waxay bartilmaamaysadaan oo howlgalo ka fuliyaan xaafadda Eastleigh, mar walba oo falal ammandaro ah ay ka dhacaan caasimada.